Nagarik Shukrabar - जीवन संवाद
निम्न मध्यम वर्गीय परिवारलाई लाजै बढी
नेपालीमा यो काम गर्दा सानो र त्यो काम गर्दा ठूलो भन्ने अर्थ लगाइन्छ । कुनै खास पेसा र काम गर्दा सानो–ठूलो भइने भावका कारण देशलाई नै हानि पुगिरहेको छ । वास्तवमा न त कुनै काम ठूलो हुन्छ न त सानो नै ! खासगरी निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा सानो–ठूलो कामको भावनाले यति गहिरो प्रभाव पारेको छ कि त्यही प्रभावका कारण उनीहरुले खुलेर आफ्नो कामबारे बताउन सक्दैनन् न त गर्नै सक्छन् ।
‘माओवादीले लखेटेपछि पण्डित भएँ’
हरेक दिनजसो पशुपतिको दक्षिण ढोकाको प्रवेशद्वारमा पुजापाठका लागि धेरै पण्डित लाइनै बसेका हुन्छन् । कोही बोरा ओछ्याएर, रातो टीका बनाएर बसेका हुन्छन् भने कोही नयाँ जजमानलाई भेट्नका लागि त्यहाँ आएका हुन्छन् । लाइनै बसेका पण्डितहरुमध्ये एक हुन्, सुदर्शनप्रसाद डोढारी उपाध्याय । उनी यो ठाउँमा पुजापाठ गर्नका लागि बसेको करिबकरिब ९ वर्ष भइसकेको छ । यो ठाउँमा प्रायः पण्डितहरु लहरै बस्ने गरेका छन् । सुदर्शन पनि हरेक दिन यहीँ आएर बस्ने गरेका छन् ।
‘हिरो बन्छु भन्दाभन्दै निर्देशक भएँ’
नेपाली समाजमा चेतनामूलक एवं परिवर्तनका सन्देश फैलाउने टेलिसिरियल बनाउने कलाकारका रुपमा चर्चित नाम हो, सविन बास्तोला । नेपालकै सुन्दर ठाउँ भनेर चिनिएको पोखरामा जन्मिएका बास्तोला मध्यम वर्गीय परिवारका छोरा हुन् । उनले पोखरामै अभिनय र कलाकारिता क्षेत्रमा संघर्ष गरे । सबिन चलचित्र क्षेत्रमा आउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताउँछन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाको गेटअगाडि एउटा पसल छ । त्यो पसल माया सुनुवारको हो । उनको पसलमा हातले बनाएका सामानहरु (हस्तकला) बेच्ने गर्छिन् । उनले यो पसल राखेको १८ वर्ष भइसक्यो । भक्तपुर दरबार क्षेत्र विदेशी घुम्न आउने प्रमुख स्थल भएको फाइदा मायालाई आर्थिक रुपमा मात्र भएको छैन, उनले यहीँ बसीबसी र ग्राहकहरुसँग कुरा गरीगरी तीन भाषा सिकिसकेकी छन् । मूलतः मायाले आफ्नो पसलमा हस्तकलाका सामग्री राख्ने र ती सामग्री विदेशीले खुबै रुचाउने भएका कारण उनलाई आर्थिकसँगै भाषाको फाइदा पनि पुगेको हो ।
‘बहिनी बुबा हुनुहुन्छ ? ‘ग्राहकको प्रश्न, अनि उनको जवाफ ‘किन हो र ? ‘ग्यास चुलो बिग्रेर बनाउन ल्याएको त्यही भएर । खै खै ल्याउनु त उनले भनिन् । खोलखाल पारेर बनाउन थालिन् । ग्राहकले जिल्ल परेर भन्ने गर्दथे तपार्इंलाई नि आउँछ र ? अनि उनले व्यवहार नै देखाउँथिन् आउँछ भन्ने कुरा । मैतिदेवीस्थित मैतिदेवी ग्यास चुल्हो मर्मत केन्द्रकी रञ्जु बस्नेत सानी मान्छे त्यो पनि केटीकेटी मान्छेलाई प्राविधिक काम आउँदैन भन्ने आम मानसिकता तर उनले यो केटाको काम यो केटीको काम भनेर छुट्टाइनन् ।
‘ढुङ्गामा बित्यो जीवन’
भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा विभिन्न मठमन्दिर बनिरहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा वत्सला दुर्गा मन्दिर पनि निर्माणको क्रममा छ । मन्दिर ढुङ्गैढुङ्गाले बनेका कारण २०७२ सालको भूकम्पमा यो मन्दिर क्षतिग्रस्त भयो । निकै लामो समयपछि यो मन्दिर पुनःनिर्माण हुन थालेको छ ।
जसले रङलाई खेलाए
५० वर्षअघि भारतको बनारसबाट काठमाडौँ आउँदा उनले नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना देखेका थिए । समय बगेर गयो । उनले आफ्नो पेसामा ख्याति कमाए र कमाए कैयौँ चेलाचपेटा । नेपाल मोह यसरी गाढियो कि बागबजारमा अडिएको उनको मन फेरि कहिल्यै इन्डियामा फर्किएन । उनी यहीँ बसे, परिवार ल्याए, यतै घर बनाए ।
जुत्ता सिलाउने आन्टी
काम न ठूलो हुन्छ न सानो । काम न पुरुषले मात्रै गर्ने भन्ने हुन्छ न त महिलाले मात्रै गर्ने भनेर तोकिएको हुन्छ तर कुनै परिवेश यस्तो हुन्छ, जहाँ पुरुष र महिलाले गर्ने काम छुट्याइएको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा महिलाले जुत्ता सिलाउनुलाई अचम्मको आँखाले हेर्छन् ।
‘पैसा होइन आन्नद कमाएँ’
भक्तपुरको मुटु टौमढीको दायाँपट्टि मोडिएर जाँदा एउटा ढुङ्गे धारा आउँछ । त्यही ढुङ्गे धारा तल जानेतिर एउटा पसल छ । त्यस पसलमा चाडपर्व अनुसारको सामान किनबेच हुन्छ । यो पसलको विशेषता भन्नु नै कहिल्यै पनि एउटै सामान बेचिदैन ।
२ सयको पेसिन्जर बोक्दा ५ सयको चिट
ठूलो स्टार होटलमा भएको भए हुन्थ्यो होला । आफू त सानो होटलको कुक परियो । ठूलोमा जान सोर्सफोर्स चाहिँदोरहेछ । त्यो सोर्स लगाइदिने कोही थिएनन् । त्यसैले कम आम्दानी हुने ठाउँभन्दा ट्याक्सी चलाउनु नै ठीक लाग्यो ।
सेल बेचेर छोरीलाई नर्स, छोरालाई साइन्स पढाउँदै
काठमाडौंको जयबागेश्वरी मन्दिरबाट सिफल जाने बाटोमा कैलाशकुट कलेज छ । कलेजसँगै एउटा सेल पसल देखिन्छ । कलेजको बाटो ओहोरदोहोर गर्नेहरुलाई सेलको हरहर बास्नाले तानिरहेको हुन्छ । विगत चार वर्षदेखि यस ठाउँमा सेल पकाएर बेच्ने काम गरिहेका छन्, नारायण श्रेष्ठ र उनकी पत्नी सीता श्रेष्ठले ।
नेपालमा बर्सेनि करोडौँ मूल्य बराबरको मदिरा भित्रिने गर्छ । यसका कारण वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ विदेशिने गर्छ तर नेपालभित्र पनि लाखौँ लिटर मदिरा उत्पादन हुने गर्छ । जसले समाजमा हिंसा, झैँझगडा, हल्ला बढाएको आरोप लाग्ने गर्छ । सबैले गलत मुनाफा कमाउने सोचले मात्र रक्सीको उत्पादन गरेका छैनन् । हरेक मान्छेका आफ्नै बाध्यता र विवशता हुन्छन् । यही विवशतामाझ रक्सी उत्पादन गर्ने भट्टीवालीका दुःख कम छैनन् ।
‘वर्षको एकचोटि गोसाइँकुण्ड’
मलाई घुम्न जान खुब रमाइलो लाग्छ । अरुअरु पेसामा सजिलै घुम्न जान पाइँदैन । आफूले पढेको पनि छैन, नत्र गाइड बन्न पाइथ्यो । सजिलै घुम्न पाउने पेसा नै गाडी चलाउनु हो जस्तो मनमा आयो । अनि घुम्ने लोभले ड्राइभर बनेँ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण ढोकाबाट गौशाला जाने बाटोमा फूल पसल राख्नेको भिड छ । त्यही भिडमा एउटा सानो नाङ्लामा फूल पसल थापेर बसेकी छन्, ज्योति सापकोटा । फूल बेचेर सानो परिवार चलाउँदै आएकी ज्योति बिहान ५/६ बजेदेखि नै यस कार्यमा खटेकी हुन्छिन् ।
‘श्रीमतीलाई पढाएर फुर्सद हुँदैन, मलाई गाडी चलाएर’
प्यासेन्जरले त के दुःख दिन्छ भन्नु । उनीहरु त हाम्रो लागि भगवान नै हो नि । उनीहरु गाडीमा चढ्न नआए हाम्रो घर कसरी चल्छ । यसमा त केटाहरु नै हो । ट्यापे केटाहरु धेरैले यस्तै गर्छन् । केटीहरुले त्यस्तो गरेको छैन ।
साउनमा प्रेम, दसैँमा विवाह
भक्तपुरको कृष्णकुमार सुवाललाई १७ वर्षअघि खपिसक्नुको चिन्ता थिएन । उनले साउन महिनाको हरेक बुधबार देउता स्थान घुम्ने क्रममा पुण्येश्वरीलाई आफ्नो दिल दिइसकेका थिए । पुण्येश्वरीले पनि कृष्णको त्यो मन मनपराएकी थिइन् ।